Iindaba - iiHolide zeSizwe ngo-Epreli 2022
IiHolide zeSizwe ngo-Epreli 2022
Ngomhla woku-1 kuEpreli
Usuku lweziDenge ku-Epreli(Usuku lwezidenge zika-Aprili okanye uSuku lweZidenge zonke) ikwabizwa ngokuba yi-Wan Fool's Day, i-Humor Day, i-April Fool's Day.Umnyhadala ungomhla woku-1 kuEpreli kwikhalenda kaGregory.Ngumnyhadala wesintu odumileyo eNtshona ukusukela ngenkulungwane ye-19, kwaye awukhange wamkelwe njengomthendeleko osemthethweni kulo naliphi na ilizwe.
IVietnam - iHung King Festival
I-Hung King Festival ngumthendeleko waseVietnam, obanjwa minyaka yonke ukusuka kwi-8 ukuya kwi-11th ngosuku lwenyanga yesithathu yenyanga ukukhumbula i-Hung King okanye i-Hung King.I-Vietnamese isafaka ukubaluleka okukhulu kulo mnyhadala.Ukubaluleka kwalo mbhiyozo kuyafana noko kwabantu baseTshayina banqula uMlawuli oMthubi.Kuthiwa urhulumente waseVietnam uza kufaka isicelo kulo mnyhadala njengeNdawo yeLifa leMveli yeZizwe eziManyeneyo.
Imisebenzi: Abantu baya kwenza ezi ntlobo zimbini zokutya (olunye lungqukuva lubizwa ngokuba yiBanh giay, isikwere kuthiwa yiBanh chung – zongzi) (isikwere zongzi sikwabizwa ngokuba “yiqebengwana elingqukuva”), ukunqula izinyanya, ukubonisa ukuhlonel’ uThixo, yaye isiko lokusela amanzi nokucinga ngomthombo.
Ngomhla we-13 kuTshazimpuzi
UMzantsi-mpuma weAsia-UMnyhadala weSongkran
Umnyhadala weSongkran, okwaziwa ngokuba nguMnyhadala weSongkran, ngumnyhadala wemveli eThailand, eLaos, kwiqela leDai eTshayina, naseCambodia.Lo mnyhadala weentsuku ezintathu ubanjwa minyaka le ukususela ngomhla we-13 ukuya kowe-15 kuAprili wekhalenda kaGregory.I-Songkran ibizwa ngokuba yi-Songkran kuba abahlali base-Southeast Asia bakholelwa ukuba xa ilanga lingena kwindlu yokuqala ye-zodiac, i-Aries, loo mini imele ukuqala konyaka omtsha.
Imisebenzi: Izinto eziphambili kulo mbhiyozo ziquka iimonki ukwenza izinto ezilungileyo, ukuhlamba nokuhlambulula, abantu abatshiza ngamanzi ukuze basikelelene, ukunqula abantu abadala, ukukhulula izilwanyana, kunye nemidlalo yokucula nokudanisa.
Ngomhla we-14 kuEpreli
Bangladesh - unyaka omtsha
Umbhiyozo woNyaka oMtsha waseBengali, owaziwa ngokuba yiPoila Baisakh, lusuku lokuqala lwekhalenda yaseBangladesh kwaye yikhalenda esemthethweni yaseBangladesh.Ngomhla we-14 ku-Epreli, i-Bangladesh ibhiyozela umnyhadala, kwaye ngo-Epreli 14/15, amaBengalis abhiyozela umnyhadala ngaphandle konqulo kumazwe aseIndiya aseNtshona Bengal, Tripura naseAssam.
Imisebenzi: Abantu baya kunxiba iimpahla ezintsha kwaye batshintshiselane ngeelekese kunye nolonwabo nabahlobo kunye nabaqhelana nabo.Abaselula bachukumisa iinyawo zabadala babo kwaye bafune iintsikelelo zabo zonyaka ozayo.Izalamane ezisondeleyo nabo babathandayo bathumela izipho namakhadi emibuliso komnye umntu.
Ngomhla we-15 kuEpreli
Kwizizwe ngezizwe-ngoLwesihlanu olungileyo
ULwesihlanu olungileyo yiholide yobuKristu yokukhumbula ukubethelwa kukaYesu nokufa, ke iholide ikwabizwa ngokuba nguLwesihlanu Ongcwele, uLwesihlanu Othuleyo, kwaye amaKatolika ayibiza ngokuba nguLwesihlanu olungileyo.
Imisebenzi: Ukongeza kwiSidlo esiNgcwele, imithandazo yasekuseni, kunye nonqulo lwangokuhlwa, imikhosi yangoLwesihlanu eLungileyo ixhaphakile kwiindawo zamaKristu zamaKatolika.
Ngomhla we-17 kuTshazimpuzi
I-Ista, ekwabizwa ngokuba luSuku lweNkosi yovuko, yenye yemibhiyozo ebalulekileyo yobuKristu.Ekuqaleni yayilusuku olufanayo nePasika yamaYuda, kodwa icawa yagqiba ekubeni ingasebenzisi ikhalenda yamaYuda kwiBhunga lokuqala laseNicaea ngenkulungwane yesi-4, ngoko yatshintshwa yaba yinyanga epheleleyo yonke i-equinox yasentwasahlobo.Emva kweCawe yokuqala.
Amaqanda eIsta: Ebudeni balo mbhiyozo, ngokwesithethe, abantu babilisa amaqanda baze bawapeyinte abomvu, nto leyo efanekisela idada elilila igazi nolonwabo emva kokuzalwa kukathixokazi wobomi.Abantu abadala kunye nabantwana bahlanganisana ngamaqela amathathu okanye amahlanu, bedlala imidlalo ngamaqanda e-Ista
I-Easter Bunny: Oku kungenxa yokuba inamandla amakhulu okuzala, abantu bayithatha njengomdali wobomi obutsha.Iintsapho ezininzi nazo zibeka amaqanda eIsta kwingca yegadi ukuze abantwana badlale umdlalo wokufumana amaqanda eIsta.
Ngomhla wama-25 kuEpreli
Usuku lweNkululeko yase-Italiya lungomhla wama-25 ku-Epreli minyaka le, olukwabizwa ngokuba luSuku lweNkululeko yase-Italiya, iSikhumbuzo sase-Italiya, uSuku lokuChasa, iSikhumbuzo.Ukubhiyozela ukuphela kolawulo lwe-fascist kunye nokuphela kokuhlala kwamaNazi e-Itali.
Imisebenzi: Kwangolo suku lunye, iqela le-aerobatic le-Italian "i-Tricolor Arrows" litshize umsi obomvu, omhlophe noluhlaza omele imibala yeflegi yase-Italiya kumsitho wesikhumbuzo eRoma.
Australia - Usuku lweAnzac
Usuku lwe-Anzac, inguqulelo endala ye "Australian New Zealand Day Remembrance Day" okanye "i-ANZAC Remembrance Day", ikhumbula uMkhosi wase-Anzac owasweleka kwidabi laseGallipoli nge-25 ka-Epreli ngo-1915 ngexesha loMhla wokuQala weMfazwe Yehlabathi yenye iiholide zikawonke-wonke kunye neminyhadala ebalulekileyo e-Australia naseNew Zealand.
Imisebenzi: Abantu abaninzi abavela kulo lonke elase-Australia baya kwiSikhumbuzo seMfazwe ukuze babeke iintyatyambo ngosuku, kwaye abantu abaninzi baya kuthenga intyatyambo yepoppy ukuba bayinxibe esifubeni sabo.
iYiphutha-uSuku lweNkululeko yaseSinayi
Ngowe-1979, iYiputa yenza isivumelwano soxolo noSirayeli.NgoJanuwari 1980, iYiputa yayifumene isibini kwisithathu sommandla woSingasiqithi weSinayi ngokweSivumelwano soXolo sase-Egypt noSirayeli esatyikitywa ngowe-1979;ngowe-1982, iYiputa yawufumana kwakhona omnye kwisithathu sommandla weSinayi., iSinayi bonke babuyela eYiputa.Ukusukela ngoko, i-25 ka-Epreli minyaka le ibe luSuku lweNkululeko kuSingasiqithi weSinayi eYiputa.
Ngomhla wama-27 kuEpreli
ENetherlands – Usuku lweeKumkani
Usuku lukaKumkani luyiholide esemthethweni kuBukumkani baseNetherlands ukubhiyozela inkosi.Okwangoku, uSuku lweKumkani lucwangciselwe i-27 ka-Epreli minyaka yonke ukubhiyozela umhla wokuzalwa kukaKumkani uWilliam Alexander, ukumkani oye wenyuka esihlalweni ngo-2013. Ukuba yiCawa, iholide iya kwenziwa ngosuku olungaphambili.Le yiNetherlands Umthendeleko omkhulu.
Imisebenzi: Ngolu suku, abantu baya kukhupha zonke iintlobo zezixhobo eziorenji;usapho okanye abahlobo baya kuhlanganisana ukwabelana ngekhekhe lenkosi ukuthandazela unyaka omtsha;eHague, abantu baqalise imibhiyozo emangalisayo ukususela ngobusuku boSuku lukaKumkani;Umngcelele wokudada uzakubanjelwa eHaarlem Square.
UMzantsi Afrika – uSuku lweNkululeko
USuku lweNkululeko yaseMzantsi Afrika yiholide eyasekwa ukubhiyozela inkululeko yezopolitiko yaseMzantsi Afrika kunye nonyulo lokuqala olungacaluli ngokobuhlanga kwimbali yoMzantsi Afrika emva kokupheliswa kocalucalulo ngo-1994.
Ixesha lokuposa: Mar-31-2022
Iminqwazi yeembroidery yesiko katata utata ikepusi yegalufa utata ezemidlalo cap umnqwazi osicaba umnqwazi wesnapback utata cap